Wararkii ugu dambeeyay weerarkii Mandheera iyo Meydadka Dadkii la laayey +Sawirro + Cod | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Wararkii ugu dambeeyay weerarkii Mandheera iyo Meydadka Dadkii la laayey +Sawirro + Cod
Waxaa degan xaaladda Magaalada Mandheera ee Gobolka Waqooyi Bari Kenya, ka dib markii Xoogaga Ururka Al Shabaab ay xalay ku galeen weerar abaabulan.
Xoogaga Al Shabaab, ayaa beegsaday dhisme ay deganaayen dad Masiixiyiin ah, iyagoo halkaa ku dilay lix ruux, halka toddobo iyo labaatan kalana ay ku dhaawaceen.
Weerarkan, ayaa waxaa ku dhaawacmay hal qof oo Soomaali Kenyan ah, kaasoo lagu magacaabo Saadaq Shariif, waxaana uu deganaa dhismihii la weeraray.
Saadaq Shariif, ayaa Ciidamada Booliska Kenya ku dhaliilay in ay ku fashilmeen ka hortagga weerar sidaan u abaabulan, oo Shabaabku ay ku soo galeen Mandheera.
Saadaq Shariif oo la hadlay BBC, ayaa wax qabad xumo ku tilmaamay inaysan Ciidamada Boolisku, sidii la rabay ugu soo gurman dhibanayaasha, xilli uu sheegay in ay u dhawaayen.
Laakiin Gudoomiyaha Mandhera, Cali Roobow, ayaa sheegay haddii aysan Ciidamada Boolisku u soo gurman lahayn dadkaasi, uu khasaaruhu ka badan lahaa inta iminka laga warqabo.
Fredrick Shiswa, Taliyaha Ciidanka Booliska Mandheera, ayaa sheegay in weerarkani uu ahaa mid si wayn ay u soo qorsheeyen Shabaabku, ujeedkooduna uu ahaa inay ku dhibaateeyan dad aanu waxba galabsan, sida uu yiri.
Afhayeenka Ciidamada Ururka Al Shabaab, C/casiis Abuu Muscab, ayaa xaqiijiyay in weerarkaasi ay qaadeen dagaal-yahano ka tirsan Shabaabka, kuwaa oo si nabadgelyo ah uga soo laabtay Mandheera, ka dib weerarkaasi, sida uu yiri.